Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO oo shir kala qaybgalay Jaaliyadda Sweden
Gudoomiyaha JWXO oo shir kala qaybgalay Jaaliyadda Sweden
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 18/1/2014, kafurmay caasimada wadanka Sweden ee Stockholm shirkii inta badan la sugayay. Shirkan ayaa waxaa ku kulmay xubnaha jaaliyadda iyo gudoonka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) oo kurmeer ku maraya qaarada Yururb. Kulankan oo jaaliyadda ay sugaysay ayaa waxaa kasoo qaybgaley oo soo buux dhaafiyay madashii kulankan lagu qabtay xubnaha jaaliyadda iyo martisharaf.
Iyadoo baryahan ay kada’yaan baraf aad udaran guud ahaan qaarada Yurub yaysan hadana kahor istaagin shacabka Somalida Ogadenya ee Gumaysi diidka ah ineey kafaa,iidaystaan fursadan qaaliga ah ay maanta nasiibka kuheleen ineey lakulmaan madaxda oogu saraysa JWXO.
Waxaa kale oo kasoo qaybgalay kulankan marti sharaf fara badan kuwaasoo lagu casuumay kasoo qaybgalka shirkan ay madaxda JWXO layeelatay Shacab waynaha Somalida Ogadenia ee kudhaqan wadanka Sweden.
Waftigan balaadhan oo uu hogaaminayay Gudoomiyaha JWXO Adm Mohamed Omar Osman oo uu wehliyo madaxa arimaha daibada ee JWXO mudane Abdirahaman Maaday ayaa waxa uu ku soo beegmay xiliwadanka Sweden uu ka dhacayo Baraf aad u fara badan.
Bulshada Ogadenya oo aad u sugaysay imantinka gudoomiyahaaya ayaa inkastoo uu aad u qaboobaa jawiga waxay soo buux dhaafiyeen hallka shirku ka dhacayo waxayna u adkaysteen qaboowgii dhacayay oo xad dhaaf ahaa .
Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad Cumar Cisman ayaa siwanaagsan loogu soo dhaweeyay madasha shirka, isagoo soo dhaweyntii ka dib khudbad balaadhan u jeediiyay xubnaha shirka fadhiyay uu kaga xogwaramay arima badan oo quseeya halganka iyo xaaladduu uu ku sugan yahay dalka.
Xubnaha jaaliyadda oo aad uxamaasadaysan kuna faraxsan iney maanta la kulmaan gudoomiyaha JWXO iyo waftidii ku wehelisay ayaa kasoo qaybgalay kulankan.
Waxaad kala socon doontaa TV-yada iyo barnaamijka Ileys shirarka Gudoomiyaha iyo Kormeer-hawleedka uu ku marayo Yurub.